“ရွှေမြန်မာ”: August 2009
လောကမှ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
လူတွေရဲ့ ပြောင်းလဲမှု မြန်ဆန်ပုံလေးပေါ့။
ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းပါ။ သူဟာ လူတွေအားလုံးကို မုန်းနေတယ်။
နောက်ဆုံး သူ့ကိုယ်သူလည်း မုန်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာ
ဒါပေမဲ့ သူမ မုန်းတဲ့ထဲမှာ မပါဝင်တာကတော့ သူမရဲ့ချစ်သူ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။
သူ့ချစ်သူဟာ သူ့နားမှာ အမြဲတမ်းနေပေးတယ်လေ။ တစ်နေ့တော့ သူ့ချစ်သူကို ပြောတယ်။
သူသာ ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကို မြင်ရရင် ရှင့်ကို လက်ထပ်ပါမယ်လို့ ပြောတယ်။
တစ်နေ့မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့မအတွက် မျက်စိတစ်စုံ လှူဒါန်းခဲ့တယ်။ သူမဟာ
ကမ္ဘာလောကကြီးရယ်၊ သူ့ချစ်သူရယ် အရာအားလုံးကို မြင်ခွင့်ရခဲ့ပြီလေ။
အခု မင်း မြင်ချင်တဲ့ ကမ္ဘာလောကကကြီးတစ်ခုလုံးကို မြင်ရပြီနော်။ မင်း
ငါ့ကို လက်ထပ်မှာလားလို့ ပြောရှာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကောင်မလေးဟာ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ချစ်သူကောင်လေးဟာ မျက်မမြင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပေါ့။
သူမဟာ သူ အရမ်းချစ်တဲ့ သူ့ချစ်သူကို ငြင်းပယ်လိုက်ပါတော့တယ်။
ကောင်လေးဟာ စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ ထွက်ခွာသွားတယ်။
နောက်တော့ စာလေးတစ်စောင်ရေးပြီး သူမဆီ ပို့လိုက်တယ်။
"Just take care of my eyes please." ပါတဲ့ရှင်။
အင်း လူသားတွေဟာ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတတ်ကြတယ်။ အဆင့်၊ ရာထူး၊
ဂုဏ်ရှိန်အရာအားလုံးကြောင့် အမျိုးသမီးမှ မဟုတ်ဘူးနော်။
အမျိုးသားတွေလည်း ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာ ဒီပုံပြင်လေးက
သင်ခန်းစာပေးလိုက်တာပါပဲ။ လောကမှာ နားလည်မှု၊ တစ်ဦးကို တစ်ဦး သည်းခံမှု၊
ကိုယ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့စဉ်က အဖြစ်အပျက်တွေကို မမေ့မလျော့ဘဲ မပြောင်းလဲတဲ့
အရိုးခံစိတ်ရင်းတွေ လူသားတိုင်း ပိုင်ဆိုင်စေချင်လို့ အင်တာနက်ကနေ
အင်္ဂလိပ်စာကို ကူးယူပြီး အင်္ဂလိပ်လို မသိနားမလည်တဲ့ ကျွန်မက အတတ်နိုင်ဆုံး
ဘယ်တော့မှ ပြန်မရနိုင်သော အရာ(၃)မျိုး (၁) ကုန်ဆုံးသွားသော အချိန် (၂) ပြောပြီးသောစကား (၃) အခွင့်အရေးကောင်းများ
တန်ဖိုးအကြီးဆုံးအရာ(၃)ခု (၁) အချစ် (၂) မိမိကိုယ့် မိမိယုံကြည်မူ (၃) အခွင့်အရေးကောင်းများ
ဘယ်တော့မှ မသေချာသောအရာ(၃)မျိုး (၁) အိပ်မက် (၂) စိတ်ကူးရည်ရွယ်ချက် (၃) ကံကြမ္မာ
အကောင်းဆုံးဖန်တီးနိုင်သောအရာ(၃)မျိုး (၁) အလုပ် ကြိုးစားခြင်း (၂) စိတ်ရင်းအမှန်ဖြင့် ကြိုးစားခြင်း ၊ ရိုးသားခြင်း (၃) စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်မြှုပ်ထားခြင်း
ပျက်စီးစေသောအရာ(၃)မျိုး (၁) အရက်သေစာ (၂) မာနကြီးခြင်း ၊ မိမိကိုယ် မိမိ အထင်ကြီးခြင်းနှင့် ၀င့်ကြွားခြင်း (၃) ဒေါသကြီးခြင်း
တစ်ကြိမ်ဆုံးရူံးပြီးနောက် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ခက်ခဲသောအရာ(၃)မျိုး (၁) ရိုသေလေးစားခြင်း (၂) ယုံကြည်စိတ်ချမူ (၃) ခင်မင်ရင်းနှီးမူ
အောက်ဖော်ပြပါ AOTS Scholarship Program ကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်သို့ ဆက်သွယ် လျှောက်ထားနိုင်ကြပါသည်။
Program Name : The Training Program on Instructors for ITSS / ITEE in Asian Countries [ENIT]
Duration : 11 November – 1 December 2009
Application Deadline : 27 August 2009 (Thursday) 4:00 PM
The qualified person can sit for the following Interview
Date : 29-8-2009 (Saturday)
Place : Meeting Room of e-Learning Center, MCF
Life is short. ဘ၀ဟာ တိုတယ်တဲ့။ အသက်ရှည်နေတယ်ဆိုရင် ဘ၀ဟာ မတိုပါဘူး။ Life is Dream. ဘ၀ဟာ အိပ်မက်ပဲတဲ့။ အဲဒါလည်း ဖွဲ့နွဲ့ခံစားပြောတာပါ။ ဘ၀ဟာ အိပ်မက်မဟုတ်ဘူး။ အိပ်မက်က အကောင်အထည်မရှိဘူး။ ဘ၀က အကောင်အထည်ရှိတယ်၊ လက်တွေ့ရှိတယ်။ Life is always full of struggle. ဘ၀ဟာ အစဉ်အမြဲ ရုန်းကန်နေရတယ်တဲ့။ အဲဒါကတော့ အမှန်ဆုံးပါပဲ။ မိခင်ဝမ်းထဲက ထွက်ကတည်းက ဘ၀ဟာ ရုန်းကန်နေရတာပဲ။ မွေးစကတည်းက ရုန်းကန်ရတာ သေတဲ့အထိဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဘ၀ကို လှော်တက်ဆိုတဲ့အရာနဲ့သာ ထိန်းသိမ်းဖို့လိုတာပါ။ ကဲ မိတ်ဆွေကော ဘယ်လို မြင်လဲ...?????
စကား၊ စကား၊ ပြောပါများ၊ စကားထဲက ဇာတိပြ လို့ ကြားဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ စကားဆိုတာ စလိုက်ရင် ကားသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ စကားနည်း ရန်စဲဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တွင်တွင်သုံးနေကြတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ စကားဆိုတာကလည်း စကားပြောတိုင်း ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးတို့ကို ဆင်ခြင်ကြရပါမယ်။
ဘုရားရှင်သည် စကားခြောက်ခွန်း၊ လူဝယ်ထွန်း၊ လေးခွန်းကိုပယ်၊ နှစ်ခွန်းတယ် လို့ ရှေ့ပညာရှိများရဲ့ လင်္ကာစကားနှင့်အညီ မှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါး နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးမရှိသော စကားမျိုးကို မပြောမဆိုဘဲ မှန်ကန်၍ အကျိုးရှိသော စကားမျိုးသာ ပြောဆိုတော်မူပါလို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
သု = ကောင်းသော စကားကို၊ ဂတ = ဆိုတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
မမှန်စကား၊ ကျိုးမများ၊ နှစ်ပါးနာလို၊ မနာလို၊
မှန်ကန်သော်ငြား၊ ကျိုးမများ၊ နှစ်ပါးနာလို၊ မနာလို၊
ဟုတ်မှန်စကား၊ အကျိုးများ၊ နှစ်ပါးနာလို၊ မနာလို၊
ရှေ့လေးခွန်းပယ်၊ နောက်နှစ်ဆွယ်၊ မှတ်ဖွယ်များ လူဗိုလ်
ဒါကတော့ မှတ်သားရလွယ်ကူအောင် ရှေးပညာရှိတို့ မှတ်သားထားတဲ့နည်း ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
၁။ မှန်လည်း မမှန်၊ အကျိုးလည်းမရှိ၊ သူတစ်ပါးတို့လည်း မနှစ်သက်သော စကားမျိုးကို မပြောရပါ။ ၂။ မှန်လည်းမှန် အကျိုးလည်းမရှိ၊ သူတစ်ပါးတို့လည်း နှစ်သက်သော စကားမျိုးကို မပြောရပါ။ ၃။ မှန်ပင်မှန်သော်လည်း အကျိုးမရှိ၍ သူတစ်ပါးတို့ မနှစ်သက်သော စကားမျိုးကို မပြောရပါ။ ၄။ မှန်ပင်မှန်သော်လည်း အကျိုးမရှိသော သူတစ်ပါးတို့ နှစ်သက်သော စကားမျိုးကို မပြောရပါ။ ၅။ မှန်လည်းမှန် အကျိုးလည်းရှိ သူတစ်ပါးတို့ မနှစ်သက်သော်လည်း အခါအခွင့်ကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်၍ ပြောသင့်မှ ပြောရပါသည်။ ၆။ မှန်လည်း မှန် အကျိုးလည်းရှိ သူတစ်ပါးနှစ်သက်သော စကားမျိုးကို အခါအခွင့်ကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်၍ ပြောသင့်မှ ပြောရပါသည်။
မှန်လည်း မှန် အကျိုးလည်းရှိ ဟု ဆိုသော်လည်း အခွင့်အခါ ကြည့်ရှုပြီး ပြောသင့်မှ ပြောရကြောင်း ကျွန်မ မှတ်သားလိုက်မိပါတော့တယ်။
စာကိုး။ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာလက်စွဲကျမ်း
၁။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ ကောင်းခြင်း၊ မကောင်းခြင်းဟာ သူရဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားပေါ်မှာပဲ ရပ်တည်တယ်။ အခြားဘာဆိုတာနဲ့မှ ပတ်သက်စရာမရှိဘူး။
၂။ ဘ၀ရဲ့အောင်မြင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်ဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာမသိထားကြလို့ လူတွေဟာ အောင်မြင်သူနည်းလှတယ်။
၃။ ကြီးမားခိုင်ခံ့တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဟာ ရိုးစင်းသေးငယ်တဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်လေးတွေက ပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်တယ်။
၄။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းကို ဘယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကမှ လိုက်မမီဘူး။
၅။ လူငယ်တစ်ယောက်ကို ပညာသင်ပေးနေရခြင်းဟာ သူပညာတက်ဖို့ထက် စာရိတ္တပြုပြင်ဖို့သာဖြစ်တယ်။
၆။ သူတစ်ပါး ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ၊ ပြုပြင်ပေးချင်တဲ့ စိတ်ရှိရင် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကို ကိုယ်အရင်ဆုံးခိုင်မာအောင်ပြင်ပါ။
၇။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားက ဖြစ်ချင်ရာမဖြစ်ရ၊ ဖြစ်သင့်တာပဲဖြစ်ရပါမယ်။
၈။ အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းမှာ အသက်ရှူရန်နှင့် စားသောက်ရန်အတွက်သာမဟုတ်ဘဲ အမြဲတစေပဲ ကိုယ်ကျင့်တရားကို မွေးဖွားပြုစုရမှာဖြစ်တယ်။
၉။ စိတ်ထားညံ့ပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်တဲ့သူဟာ ကိုယ်လုံးတီး လမ်းလျှေက်တဲ့လူထက် ပိုပြီး ရှက်ဖွယ်လိလိ။
၁၀။ အရာရာတိုင်းရဲ့ သော့ချက်ဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားပဲ။ အဲဒီသော့သာကိုင်ထား၊ လိုတာတွေ အကုန်ဖွင့်ယူလို့ရတယ်။
၁၁။ လူတစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်ခြင်းဟာ ကံမကောင်းလို့ထက် အကျင့်မကောင်းလို့ဖြစ်မှာ။
၁၂။ အကျင့်မကောင်းသူမှန်သမျှ ကိုယ်အင်္ဂါစုံပြီး တောင့်တင်းချောမောလှပပေမယ့် ဒုက္ခိတတစ်ယောက်သာဖြစ်တယ်။
၁၃။ စိတ်ချမ်းသာရင် ကိုယ်ကျန်းမာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြီး စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာနေတဲ့သူဟာ အကုသိုလ်လည်း ချမ်းသာပြီးရင်း ချမ်းသာနေလိမ့်မယ်။
၁၄။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ရှင်းရှင်းကလေးပါပဲ။ ကိုယ်ကျင့်တဲ့တရားမို့ ကိုယ်ကျင့်တရားလို့ဆိုတယ်။ သူများကျင့်တဲ့တရားက ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်မလာဘူး။
၁၅။ ကောင်းတဲ့ အကျင့်ကို အတုယူပါ။ မကောင်းတဲ့ အကျင့်ကို မပြုမူပါနဲ့။
၁၆။ ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက်၊ ဘာဒုက္ခပဲတွေ့တွေ့၊ ဘယ်လိုလူနဲ့ ဆုံဆုံ၊ အသက်ထက် ကိုယ်ကျင့်တရားကိုစောင့်ရှောက်ပါ။
၁၇။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတဲ့သူဟာ တော်တော်နဲ့မသေဘူးတဲ့။ ဘုန်းကြီးလို့အသက်ရှည်သတဲ့။ အချို့ဆို သေကိုမသေဘူးတဲ့။ လူကိုမမြင်တာပဲရှိသတဲ့။
၁၈။ ဒုက္ခဆိုတာ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတဲ့သူဆီလည်း အ၀င်အထွက်ရှိတာပဲ။ သူလာလည်တဲ့အခါ ကိုယ်ကျင့်တရား နေမကောင်းမဖြစ်ရန် အရေးကြီးတယ်။
၁၉။ နာမည်၊ ခန္ဓာကိုယ်၊ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ဆွေမျိုးဉာတိထက် အဖိုးတန်ဆုံးအရာကတော့ ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ကျင့်တရားပဲ။ ကောင်းနိုင်သမျှ တန်ဖိုးမြင့်တယ်။
၂၀။ ကိုယ်ကျင့်တရားထက်ပိုပြီး အရေးကြီးတာဘာများရှိသေးလို့လဲ။
၂၁။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းသောသူဟာ သေခြင်းကို ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး။
၂၂။ အရွယ်(၃)ပါးထိန်းသိမ်းရမှာက ပထမအရွယ်- ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ဒုတိယအရွယ်-ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ တတိယအရွယ် - ဘ၀ပြတ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရား။
၂၃။ ကိုယ်ကျင့်တရားကို မွေးမြူတတ်ဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့က ပိုပြီးလိုတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကို မြှင့်တင်တတ်ဖို့က သာ၍လိုတယ်။
မင်းယွန်းသစ် ဆီမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည် ။
Blog Day အထိမ်းအမှတ် တွေ့ဆုံပွဲကို တက်ရောက် လိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အနေနှင့် မည်သူမဆို အမည်စာရင်း register လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ခရီးစဉ်လိုက်ပါမယ့် သူများက တစ်ဦးလျှင် ၅၀၀၀ ကျပ် ပေးသွင်းရမှာပါ။ ခရီးစဉ်မလိုက်ပါနိုင်သူများ အနေနှင့်တော့ ပေးသွင်းရန် မလိုအပ်ပါဘူး။ လူတိုင်း နာမည်စာရင်း ပေးသွင်းဖို့ လိုအပ်တာကတော့ နာမည်စာရင်းအတိအကျ ရမှာသာ အင်္ကျီအရေအတွက် မှာယူလို့ ရမှာမို့ပါ။ နာမည်စာရင်း ပေးသွင်းခြင်းကို အနော်ရထာလမ်း တည့်တည့် ၅လမ်း၊ ကလီမှတ်တိုင် အနီး၊ သင်အာ စားသောက်ဆိုင် ကပ်လျက်ရှိ Activator Cyber Cafe ဆိုင်တွင် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၄နာရီ အတွင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။ ယနေ့မှ စ၍ ၂၅ရက်နေ့ အထိ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။
တွေ့ဆုံပွဲအနေနှင့် ၂၉ရက်နေ့ မနက် ၁၀နာရီတွင် ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်၌် တွေ့ဆုံကျင်းပ ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းပေးသွင်းထားသူ မည်သူမဆို လာရောက်နိုင်ပါတယ်။ အကျီလက်ဆောင် အပြင် တခြားသော လက်ဆောင် ပစ္စည်းများကိုလဲ အမှတ်တရ အဖြစ် ပေးအုံးမှာ ဖြစ်ပြီး တပျော်တပါး ကစားကြအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သရေခေတ္တရာ 2.0 ခရီးစဉ်ကိုတော့ ၂၉ရက်နေ့ ညဘက် ၁၀နာရီမှာ စထွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (စုရပ်ကို တွေ့ဆုံပွဲ နေ့ကျရင် အားလုံးညှိနှိုင်းပြီး အတည်ပြု ပြောကြားပေးပါမယ်)။ သွားမည့် ခရီးစဉ် ကြာချိန်ကတော့ ၂ညအိပ် ၃ရက် ခရီးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှ ပြည်မြို့ကို ၆နာရီခန့် မောင်းနှင်ရတဲ့ အတွက် ၂၉ရက်နေ့ ည၁၀နာရီ ထွက်လျှင် ၃၀ရက်နေ့ မနက် ၄နာရီတွင် ပြည်မြို့သို့ ရောက်ရှိပါမယ်။
ပြည်မြို့ရောက်သည်နှင့် နံနက်စာစားကာ ခေတ္တ နားမည် ဖြစ်ပြီး မနက် မိုးသောက်သည်နှင့် ပြည်ချောင်းသာ (ဤနေရာတွင် Knowlege Sharing အစီအစဉ်နှင့် ကစားပွဲများကို ကစား ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။) ၊ သရေခေတ္တရာ မြို့ဟောင်း၊ အခြား ပြည်မြို့၏ အထင်ကရ ဘုရားများသို့ သွားရောက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃၀ရက်နေ့ ည ၁၂နာရီ တွင် ပြည်မြို့မှ ပြန်လည် ထွက်ခွာမှာ ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ကို ၃၁ရက် (တနလာင်္နေ့) မနက် ၆နာရီတွင် ပြန်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့အားဖြင့်တော့ စနေနေ့ ညဘက် ထွက်ကာ တနင်္ဂနွေနေ့ တနေ့လုံး လည်ပတ် ပြီးလျှင် တနလာင်္နေ့ မနက် ပြန်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ ညဘက် ပြန်ရောက်လျှင် ရပေမယ့် မိန်းကလေးများ အနေဖြင့် မိုးချုပ်လျှင် ကားအခက်အခဲ ရှိမည်စိုးသော ကြောင့် ၃၁ရက်နေ့ မနက်ကို ပြန်ရောက် ရန်စီစဉ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ (ရုံးသမားတွေ အတွက်လဲ အဆင်ပြေမှာပါ)။ ပြီးတော့ လူဦးရေ အပေါ်မူတည်၍ ကားငှားရမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ဘလော့ဂ်မှ သူငယ်ချင်းများ အွန်လိုင်းမှ သူငယ်ချင်းများ အနေဖြင့် ၂၅ ရက်နေ့ မတိုင်ခင် အစောပိုင်းကို စာရင်းပေးသွင်းထားစေလိုပါတယ်။
တွေ့ဆုံပွဲလူစာရင်း ပေးသွင်းရန် အခက်အခဲရှိသူများ (ခရီးစဉ်မလိုက်နိုင်သည့် သူများ) အနေနှင့် သွားလာရန် နေရာ အခက်အခဲရှိပါက bloggersociety.mm@gmail.com ကို ဆက်သွယ် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ခရီးစဉ်လိုက်ပါမယ့် သူတွေကတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လာပေးသွင်းဖို့ လိုတယ်နော့။ :) ကဲ ဘလော့ဂ်ဒေးမှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆုံကြရအောင်။
ငါ့အား ငါ့အင် လုံ့လယှဉ်၍
၁။ တင်ပေဖူးသည်၊ ကျေးဇူးရှိလျက်၊ အဆပ်ခက်။
၂။ မယားရှိလျက်၊ အလှည့်ခက်။
၃။ ဧည့်သည်ညဉ့်နက်၊ အအိပ်ခက်။
၄။ ပစ်ခွာခဲ့လျက်၊ အပြန်ခက်။
၅။ လာခဲ့ခေါ်လျက်၊ အနှင်ခက်။
၆။ ပေးပြီးပါလျက်၊ အယူခက်။
၇။ ချောင်းရေလျှံတက်၊ အကူးခက်။
၈။ ရင်ဆိုင်တွေ့လျက်၊ အပြေးခက်။
၉။ သံသာချိုမြွက်၊ စကားခက်။
၁၀။ ကြောက်လန့်ပြေးတက်၊ အဆင်းခက်။
၁၁။ ကန့်ကူကျောက်ထွက်၊ အရေးခက်။
၁၂။ သန္စေပြည့်နှက်၊ ဆေးကုခက်။
၁၃။ ခရီးညွန်ဆက်၊ အသွားခက်။
၁၄။ တံတားကျိုးပျက်၊ အလျှောက်ခက်။
၁၅။ ရေအိမ်ပြိုလျက်၊ အပြင်ခက်။
၁၆။ သားမြေးဆိုးလျက်၊ အစွန့်ခက်။
၁၇။ ထွေးပြန်ပြီးလျက်၊ အမျိုခက်။
၁၉။ မြတ်သည်သုံးပါး၊ မှန်းထားပြီးလျက်၊ အသုံးခက်။
၂၀။ ဆူးငြောင့်တွင်းကျင်း၊ ကျုံးသွင်းပြည့်နှက်၊ အ၀င်ခက်။
၂၁။ အသားမည်းနက်၊ အဆင်ခက်။
၂၂။ ဆိုးသည့်သတင်း၊ သားချင်းရှိလျက်၊ အပြောခက်
၂၃။ ပက်ပယ်လှေဖျက်၊ အတိုက်ခက်။
၂၄။ ကွဲပြားအယူ၊ နားကင်းထူ၊ သုံးလူရှင်လျက်၊ အဟောခက်။
တောင်ဖီလာဆရာတော်ဘုရားကြီး ထပ်ဆင့်ဓမ္မဒါနပြုပါသည်။ ခွန်လင်းလက်ဟန် ရဲ့ ပေးပို့ချက်ကလေးပါ။
ကျွန်မ ထပ်ဆင့် ဓမ္မဒါနပြုပေးပါသည်။
Blog Day 2009 Gathering Ceremony and Blogging Excursion
2009 ခုနှစ် သြဂုတ်လ (31) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ဘလောဂ့်ဒေး အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်
ဘလောဂ့်ဂါ တွေ့ဆုံပွဲနှင့် လေ့လာရေး ခရီးစဉ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာသာမက. မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ ရှိကြတဲ့ ဘလောဂ့်ဂါတွေ
စုံစုံညီညီ တက်ရောက်ပါဝင် ဆင်နွှဲနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ရှိနေကြတဲ့
ဒီအစီအစဉ်ကို 2009 ခုနှစ် သြဂုတ်လ (29) ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လာရောက်ဆင်နွှဲကြတဲ့ ဘလောဂ့်ဂါတွေ အားလုံးအတွက် Game, Role Play, Quiz အစရှိတဲ့
ပျော်ရွှင်စရာ ၊ ဗဟုသုတရစရာ အစီအစဉ်များပါဝင်တဲ့ အပြင် ၊ ဘလောဂ့်ဂါ အချင်းချင်း
အမှတ်တရ လက်ဆောင်များကိုလည်း လှဲလှယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခုအနေဖြင့် သရေခေတ္တရာ ၊ ပြည်မြို့ကို Blogging
Excursion တစ်ခုအနေနဲ့ သွားရောက်လေ့လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီခရီးစဉ်ကို
Shrikittaya 2.0 လို့ အမည်ပေးထားပြီး.. ခရီးစဉ်မှာ လိုက်ပါကြမယ့်
ဘလောဂ့်ဂါတိုင်းကို နှစ်သက်ကြည်နူးစေမယ့် အစီအစဉ်တွေ ထပ်မံထည့်သွင်းပေးထားမှာ
ဒီပွဲမှာ လာရောက်ဆင်နွှဲလိုကြတဲ့ ဘလောဂ့်ဂါများအားလုံးအနေဖြင့် Register
ပြုလုပ်တဲ့အခါ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Registration Fees ကိုပေးဆောင်ရပါမယ်
2009 ခုနှစ် သြဂုတ်လ (29) ရက်နေ့ ည (10) နာရီခန့်တွင် ပြည်မြို့ကို
ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပြီး ၊ 30 ရက်နေ့ ညပိုင်းကို ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်ရောက်မှာ
ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါခြင်းမရှိပဲ ၊ တွေ့ဆုံပွဲသို့လည်း